Waxaa bilowday qorshihii ay Itoobiya kula wareegi lahayd gacan ku haynta dekedda Kismaayo oo ay hadda maamulaan ciidamada Kenya. | Voice Of Somalia
Ujeedka Itoobiya ayaa ah in ay qabsato dekadda magaalada Kismaayo si halkaasi ay badeecado ganacsi ugalasoo degto kadibna ugu gudbiso Kenya oo ay dalka Itoobiya usii mariso.
Itoobiya oo ah dal Malaayiin qof ku noolyihiin malahan bad waxayna nolosha dadkaasi tirada badan ku tiirsantahay badeecadaha kasoo dega dekado kuyaal magaalada Jabuuti.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in ciidamada Itoobiya ay bedeli doonaan ciidanka Kenya ee saldhigyada ku leh magaalada Kismaayo, JEN Gabre iyo Teferi oo kamid ah saraakiisha ciidanka Itoobiya ee Gedo iyo Bay iyo Bakool ayaa hoggaaminayay saraakiisha indha indhaynta ku jooga Kismaayo wuxuuna maamulka Axmed Madoobe ku wargeliyay in bisha soo socota ay la wareegi doonaan ammaanka Kismaayo.
Qorshahaan oo markii ku bilowday si doqon magarato ah oo aad looga soo shaqeeyey ayaa hadda usoo gudbay wejigiisii labaad.
Markii hore waxaa Kismaayo qabsaday ciidamada Kenya oo xoog kusoo galay dabayaaqadii 2011-ka, dabadeedna waa loo sharciyeeyey oo ciidamadii kenya ayaa lagu daray kuwa Amisom si qabsashada Kismaayo looga dhigo mid caalami ah oo howlgal ah.
Markii Soomaalida intaas la marsiiyey kadib ayaa ciidamada Itoobiya haddana lagu daray kuwa amisom oo loo xiray koofidii cagaarnay ee fededeynaysay qabsashada dalka Soomaaliya.
Si kastaba ha ahaatee hadda waxaa socda wejigii labaad oo ah in arinka laga dhigo laba qeybood oo Amisom kawada tirsan oo isku wareejinaayo howlgalkii kismaayo waxayna taasi doontaa inay Kismaayo sidaas ku gasho gacanta dowladda Itoobiya. waxaa ladhihi karaa ciidamada Kenya waxay ahaayeen (gol eey baa lagu sanhiyaa) kadibna ay Itoobiya xalaashato gacan ku haynta gobolada Jubooyinka.